Calaamadeynta Shakhsiyeed: Sida Loo Qoro Wax Ku Saabsan aniga » Martech Zone
Andrew Wise ayaa qoraal qoto dheer oo qoto dheer ku qoray Ugudambeynta Sida Loo Hagayo Dhismaha Aniga Ku Saabsan waa inaad si faahfaahsan u tagtaa. Maqaalka oo uu weheliyo, wuxuu soo saaray infographic aan hoos ku wadaagno oo daboolaya codka & codka, hadalada furitaanka, shakhsiyadda, bartilmaameedsadayaasha iyo baahiyaha kale.
Waan jeclahay inaan kudarto 2 senti arimahan, markaa halkan ayaa loo socdaa. Runtii waxaan kugu dhiiri galin lahaa ganacsi ahaan ama shaqsi ahaanba, inaad aado meel ka baxsan aagaaga raaxada. Waan ogahay dad aad u tiro badan oo aan jeclayn inay naftooda la hadlaan, ma jecla sawirrada laga qaado naftooda, waxayna quudhsadaan fiidiyowyada ama maqalka naftooda. Waxaa laga yaabaa inay xitaa aaminsan yihiin in dhaqankani yahay mid narcissistic ah. Had iyo jeer waxaan ku arkaa hadalo sidan oo kale ah baraha bulshada.
Waa tan jawaabtayda: Boggaaga About Me adiga maahan!
Sawirro iskaa ah, fiidiyowyo ku hadlaya, sawirro xirfadeed, iyo sharraxaadda adiga ayaa loogu talagalay dhagaystayaashaada. Haddii aad tahay shaqsi la yaab leh oo aad u liidata… aad Aniga igu saabsan bogga waa inuu ka tarjumaa taas. Dabcan, waxay ila tahay wax la yaab leh in qof walbo ogeysiiyo inaad hooseyso. Laakiin haddii aad khushuucsan tahay, sidee baa qof u ogaanayaa? Ma waxaad sugeysaa inaad si shaqsi ah ula kulanto qof kasta si ay ugu fiirsadaan is-hoosaysiintaada? Ama sug dadka kale inay kula hadlaan hoos-u-dhacaaga? Ma dhaceyso.
Haddii ujeeddadaadu tahay inaad ku dhisto maamul iyo hoggaan meeshaada, Kala duwanaanshahaaga ugu fiican waa adiga. Khasab maahan waxbarashadaada, taariikhdaada shaqada, waa adiga! Adiga ayaa qof walba ogeysiinaya sababta ay kula shaqeynayaan. Dadku waxay jecel yihiin inay la shaqeeyaan dadka ay doonayaan inay la shaqeeyaan. Go'aannada wax iibsiga badanaa waa kuwo shucuur leh go'aankuna wuxuu ku tiirsan yahay sida wanaagsan ee rajadaadu ay kugu kalsoon tahay oo kuu aqoonsato inaad tahay mas'uul ka tirsan xirfaddaada.
Bixinta labada isticmaale ee mashiinka raadinta iyo booqdayaasha bogagga dhammaan safafka ay u baahan yihiin - khudbadaha aad soo qabatay, hoggaamiyeyaasha aad la xiriirto, buugaagta aad qortay, iyo xitaa farriinta shaqsiyeed ee iyaga loo dirayo waa muhiim.
Xusuusin dhinac ah: Aniguba dambiile baan ahay! Waxaan lugaha ku jiidayay sanado anigoo dhisaya bog heegan u ah bartayada shirkada oo ku saabsan hadalkayga… laakiin taladan Andrew waxay igu dhiirigalinaysaa inaan sameeyo!
Tags: aniga igu saabsanku saabsan boggacaqli badannasumad shaqsiyeedbogga shaqsiyeed
Sidee Teknolojiyada Daabacaadda ee 3D wax uga beddeli doontaa Mustaqbalkeenna
Mawduucyada Emailka ee Jawaabta Bilaashka ah ee laga helo Litmus
Tani waa waxyaabo aad u fiican.
Kuwa ka shakisan inay muujiyaan hiwaayadooda iyo waxyaabaha ay xiiseeyaan maxaa yeelay ma doonayaan inay u muuqdaan kuwo aan xirfad lahayn, waxaan u leeyahay tan:
Maahan xirfad ku saabsan kooxeed, firfircoonaan kooxeed.
Haddii akhristahaagu u arko qof ka baxsan kooxdooda waxay la yeelan doonaan dabeecad cadowtinimo ah adiga.
Adoo kashifaya waxoogaa yar oo noloshaada ku saabsan, sida inaad carruur leedahay, orod, jacaylkaaga cuntada mexican waxaad u sii dhaadhacaysaa kooxda dhexdeeda halkaasoo dadku kugu arki doonaan iftiin aad u wanaagsan.
Waxay u egtahay saameynta halo.
Aniga aragtidayda xalka ugu fiican ayaa ah inaad isu muujiso inaad tahay qof aamin ah. Dadku waxay jecel yihiin inay ganacsi la sameeyaan qof ganacsade ah oo caqli badan, dhaqan iyo daacad ah.
Feb 7, 2017 markay ahayd 9:42 PM
Waxaan xiray heshiisyo badan oo ku saleysan isku xirka ku saleysan wadaagida maqaayadaha aan ugu jeclahay macaamiishayda mustaqbalka.